Page 8 – Happybox
သမီးတွေက ဖအေချစ် သားတွေက မအေချစ်လို့ပြောကြပေမယ့် တကယ်တော့ အဖေလုပ်သူတိုင်းက သားဦးလေးကိုပဲလိုချင်တာများပါတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ စစချင်းကလေးဘဝမှာအဖေတွေက သားတွေကိုသိပ်တန်ဖိုးထား သိပ်ချစ်ပါတယ်။ နောက်မှသာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားနဲ့ အဖေနဲ့ မတည့်ကြတော့တာမဟုတ်လား။ Beautiful Boyဆိုတာကလဲ သားနဲ့ ဖအေကြားက မေတ္တာကိုပြသတဲ့ ...
A Cool Fish ( 2018 )
2018 ထွက် IMDb 7.2 ရရှိထားတဲ့ တရုတ်ကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ရဲဘက်အကူလုပ်ချင်နေတဲ့လောင်မာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူစာမေးပွဲအောင်တဲ့နေ့မှာပဲအမူးလွန်ပြီးကားမောင်းရာကသူ့မိန်မဆုံးပါးပြီး သူ့ညီမကဒုက္ခိတဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့သူလုံခြံရေးလုပ်တဲ့ siteထဲကနေသေနတ်တစ်လက်ရှာတွေ့ခဲ့ပေမယ့်မထင်မှတ်ပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဖုန်းဆိုင်ကိုဓားပြတိုက်မှုမှာသေနတ်တစ်လက်ပါဝင်နေပြန်တယ်။ အဲ့သေနတ်ကလောင်မာရဲ့သေနတ်ဖြစ်နေမလား။ ဓားပြတိုက်တဲ့တရားခံအစစ်ကိုဘယ်လိုဖမ်းမိမလဲ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒုက္ခိတဖြစ်သွာရတဲ့အတွက်လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူ့အစ်ကိုကိုမုန်းတီးနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်...သူ့အိမ်ထဲအမှတ်မထင်ရောက်လာနဲ့ဓားပြနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံပြီးဘယ်လိုတွေများဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။ အနှိပ်သမအမည်ခံပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ကသူချစ်ရမဲ့သူကိုဘယ်လိုတွေကာကွယ်ပေးမလဲ။ ရဲဘက်အကူဖြစ်ချင်တဲ့လောင်မာရဲ့မလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားမှုတွေ၊ အပြန်အလှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်.....Crd: Channel Myanmar
Rating 6.6 ရရှိထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်…. ဒီကားကတော့ မက်ဒလင်း ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ သူက နည်းနည်းလဲ စိတ္တဇဆန်ဆန်ဖြစ်နေပြီးသူ့အမေကိုလဲ မထင်ရင်မထင်သလို ရိုက်တာတွေ၊ ကုတ်တာတွေ၊အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်သူ့ကိုဆူတာမျိုးတို့ ဘာတို့ဆိုရင်ပေါ့။ သူပျော်တာကတော့ စိတ္တဇဆန်ဆန် ပြဇာတ်တွေ ကပြလေ့ရှိတဲ့အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ရတာပါ။ ...
ဂင်ဂျောင်းမီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ နယ်မြို့ကနေဆိုးလ်ကိုအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတစ်ဦးပါ။ အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ပေမယ့် အားနာပြီးကြောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်လို့အလုပ်ခွင်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ လူလည်ကြမှုကိုလည်းအမြဲခံရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကြောက်ရွံ့အားငယ်တတ်တဲ့ ဂင်ဂျောင်းမီ တစ်ယောက် သူနေထိုင်ရာတိုက်ခန်းဟာထူးဆန်းပြီးထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာသိလာရတဲ့အခါ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီ Door Lock 2018 ဇာတ်ကားဟာလျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ...
ဒုန်ချွဲ နဲ့ ဂျီဆူး တို့ဟာ သာယာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပြီးအေးအတူ ပူအမျှ နေတက်ကြသူတွေပါ...ဒုန်ချွဲ က အရမ်းရိုးသားလွန်းတော့ အမြဲတမ်းလူလိမ်ခံရပါတယ်...ချစ်ဇနီးလေး ဂျီဆူး အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရတာ မကြည့်ရက်တဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်လဲ အပင်ပန်းခံပြီး ပိုက်ဆံရှာနေရပါတယ်…ဒုန်ချွဲဟာ ဂျီဆူး နဲ့ မတွေ့ခင်တုန်းက ...
( 18+ လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတိုင်း အပြာကားလို့မထင်စေချင်ပါဘူးရုပ်ရှင်ကားရဲ့ Age Rating အရဆို Adult Only ဆိုတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ကြည့်ရှု့လို့ရပါတယ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ လိင်အသာပေးအခန်းတွေပါတာကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေ၊ မိသားစုနဲ့ကြည့်ရှုဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး) ဟောဒီလောကမှာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ အရှုံးဟာ ...
ကိုင်း Horrorကားကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အတွက် The Whispering(2018) ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်…. အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယောအွန်းဟာတစ်ယောက် အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဆက်တိုက်မက်နေခဲ့တယ်... ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာ အမှတ်နည်းခဲ့လို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပိုပြီး ကြုံတွေ့လာရတယ်... ယောအွန်းဟာ နဲ့အတူ အတန်းဖော်ငါးယောက်ဟာ ကမ်းခြေဘက်ကို ...
Action ကားပရိတ်သတ်တွေအတွက်ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ CIA ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်ပြန်ကြေးစားတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ကြားထဲက အရှုပ်တော်ပုံကို ပြထားတာပါ။ သူတို့လောကရဲ့ အမြဲတမ်း ရန်သူ အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာ မရှိပုံတွေ၊အချင်းချင်း တစ်ပတ်ရိုက်ကြတဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့မို့ ကြည့်ရတာ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကိုသိချင်ရင်တော့ ...
ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာတစ်ခါမှမဆုံဖူးတဲ့သူစိမ်း ၇ယောက်ကားတစ်စီးပေါ်အတူတူစီးလာပြီး မမျှော်လင့်ပဲဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားရာကနေ Endless Loop တစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်...လှိုဏ်ခေါင်းထဲကလည်းပြန်မထွက်နိုင်..လှိုဏ်ခေါင်းထဲက အချိန်ကအပြင်ကအချိန်ထက်လည်းပိုမြန်ဆန်လွန်းနေတယ်...အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အားလုံးစုစည်းပြီးကြိုးစားရပါတော့မယ်...စွန့်စားမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဘာတွေကြုံတွေ့လာရမလဲ….အလောင်းတွေကရောဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ…..မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာနိုင်မလဲ……ဒီလူ ၇ယောက်ကရောဘယ်လိုတွေဆက်စပ်မှုရှိလဲ……နောက်ဆုံးဘယ်သူတွေကရော ဒီလှိုဏ်ခေါင်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားနိုင်မလဲ…….ဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိလဲ……ဇာတ်လမ်းအစကနေစိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့အဆုံးထိဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန်မှုခင်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ....Crd: Channel Myanmar
20ရာစုရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ ဒီဇာတ်လမ်းစခဲ့တယ် အရာရာဟာ ဘုရားသခင် အလိုတော်အတိုင်းပါပဲ။ ကောင်းကင်မှာ မီးမိုးတွေ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာလည်း ပက်ကြားတွေအက်လို့ လူတွေအားလုံးရဲ့ ဆောက်တည်ရာမဲ့ ကူကယ်ရာမရှိ ပြေးလွှားသံတွေ ဒီအချိန်မှာ အပြာရောင်အလင်းတန်းကြီး တစ်ချက်ပေါ်လာ အဲဒီအလင်းတန်းရဲ့ အစမှာ ဂေါ်ဇီလာဟာ ...
Page 8 of 110 Prev 1 …789… 110 Next